रूस र संसारमा Anatomical थिएटर
एक कोठा अर्को भवन भित्र एक छुट्टै सुन्दर वास्तुकला संरचना छ कल्पना गर्नुहोस्। कोठा - को एम्पिथियटर, तर धेरै सानो। एक सर्कल विराजमान रुचि दर्शक मा प्रबन्ध बेन्चहरूले जाँदै मा, र कार्य को केन्द्र मा ... होइन, यो एक काठ तालिका मा एक जादू अनुष्ठान, यसको महत्त्व भइरहेको छ हुनत, सायद, यो समीकृत सकिन्छ छ। एक चिकित्सा विद्यार्थी - कोठा को केन्द्र मा बेन्चहरूले मा मानव शरीर को एक शव परीक्षा र रुचि दर्शक छ। यस्तो विद्यालय त्यहाँ धेरै थिए मध्य युग, र यो anatomical हलहरूमा।
को anatomical थिएटर के हो
त्यसैले, किन, कहाँ र यी सुविधाहरु निर्माण थिए? को anatomical थिएटर के छ र तिनीहरूले वर्तमान मा अवस्थित कि? का साथ सामना गरौं।
Anatomical थिएटर - विद्यार्थी निको पार्ने विज्ञान सिकाउन विश्वविद्यालयहरु मा प्रयोग भएको थियो जो एक विशेष संस्थाले। कोठा को केन्द्र मा मानव वा पशु शरीर खोल्ने भयो। यसलाई अर्को दर्शक गर्न बेन्चहरूले मा एकै समयमा शिक्षण एड्स रूपमा प्रयोग गरिन्छ कि धेरै वास्तविक skeletons बस्न सक्ने रोचक छ। धेरै विद्यार्थी मात्र आफ्नो कार्यहरू आँखा मा के भइरहेको छ हेर्दै छैन, तर पनि उहाँले देख्नुभयो र शिक्षकहरू टिप्पणी के औंल्याए। ठीक छ, मध्ययुगीन दृष्टान्तहरू द्वारा न्याय, केही देख्ने जस्तै जो शाब्दिक अर्थ स्मृति चिन्ह Mori, रूपमा slogans संग placards पकड थिए "स्मृति चिन्ह Mori।"
Anatomical हलहरूमा। कथा
पहिलो anatomical थिएटर विश्वविद्यालय Padua को मा 1594 मा बनाइएको थियो। उहाँले वर्तमान दिन बाँचे। एक सानो पछि, 1596 मा, यस्तै शैक्षिक संस्था विश्वविद्यालय लियडेन को मा खोलिएको थियो। 1637 मा बोलोग्ना मा anatomical थिएटर आए।
चाखलाग्दो कुरा, र अर्को ऐतिहासिक तथ्य। को XIX सताब्दी मा anatomical थिएटर प्रमुख अमेरिकी statesman, को लेखक खोलियो स्वतन्त्रता को घोषणापत्र र समवर्ती तेस्रो अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफरसन। तर, यो शैक्षिक संस्था लामो पछिल्लो भएन र दोस्रो विश्व युद्ध सुरु गर्नु अघि नष्ट भएको थियो।
प्रभाव सबैभन्दा सुन्दर र अझै पनि
हाम्रो दिनमा अवस्थित यस anatomical थिएटर के हुन् र तिनीहरूलाई यो दिन गर्न खोल्ने त्यहाँ आयोजित? ठीकै सबैभन्दा सुन्दर सकिन्छ यस प्रकारको को संसारको संस्थाहरू के हुन्?
लण्डन Anatomical थियेटर, सेन्ट थोमस को चर्च मा प्रभाव अझै पनि छ। यो XIX सताब्दी खोलिएको थियो, र अन्तिम शताब्दीको 60s देखि - पुनर्निर्माण पछि - एक संग्रहालय रूपमा विद्यमान छ। त्यहाँ र नेदरल्यान्ड मा, dissecting एम्स्टर्डम मा अभिनय। सुरम्य पुरानो भवन को XV शताब्दीमा बनाइएको थियो, र दुई शताब्दीपछि यो विश्वविद्यालय को एक विशेष भवन खुलेको छ। बाटो गरेर, लेखिएको Theatrum Anatomicum निर्माण गर्न प्रवेश भन्दा अब distinguishable छ, र, तर खोल्ने अब आयोजित छ। अहिले यो कोठा मा वैज्ञानिक समुदाय को बैठक हो।
सबैभन्दा सुन्दर जीवित anatomical थिएटर को एक बार्सिलोना (इटाली) मा Sala Gimbernat छलफल। पर्खालहरु को भित्री मा, धनी बैजनी मखमल संग draped छन् - संगमरमर र मुलम्मा। पुरातन समयका मा शव परीक्षा प्रदर्शन जहाँ एउटै महान सेतो संगमरमर गरे र सञ्चालन तालिका देखि। आजकल एक संग्रहालय छ।
रूस: सेन्ट पीटर्सबर्ग, पत्रुस म र Curiosities
1698 मा, पत्रुस म लियडेन anatomical थिएटर भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यहाँ सम्राट प्रोफेसर फ्रेडरिक Ruysch भेटे, र उसलाई केही पाठ चिकित्सा लिए। 1706 मा, पहिलो anatomical थिएटर अन खोलिएको थियो रूस इलाका, र प्रसिद्ध डच प्रोफेसर निकोलस Bidloo मा सिकाउन उहाँलाई निमन्त्रणा। यो पत्रुस आफूलाई म मानव शरीर संरचना को विज्ञान रुचि र बारम्बार व्यक्तिगत शव परीक्षा र dissected corpses सञ्चालन भएको रोचक छ।
1726 मा, anatomical थिएटर को Kunstkammer को निर्माण सारिएको थियो। त्यहाँ अझै पनि सञ्चालन गर्दै अनुसन्धान र विकास गतिविधिहरु, जर्मनी र हल्याण्ड प्राध्यापकहरू एक अतिथि नेतृत्व। त्यसपछि थिएटर विज्ञान को एकेडेमी को भवन मा सारियो र XIX सताब्दी को शुरुवात यो बिस्तारै अनुसन्धान संस्था यसको महत्त्व गुमाएको छ।
कजान anatomical थिएटर
तथापि, मात्र होइन सेन्ट पीटर्सबर्ग, यो सम्भव भएको प्रदर्शन को उद्घाटन देख, मानव शरीर संरचना अध्ययन थियो। अब Tatarstan को गणतन्त्र के हो मा पनि anatomical थिएटर अवस्थित। अब कजान र यसको मानव शरीर संग्रहालय-थिएटर र रुचि देख्ने आफ्नो ढोका खुल्छ, तर अब शव परीक्षा बाहिर छैन। हाल, पूर्व anatomical थिएटर को निर्माण को कजान राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय को सामान्य शारीरिक रचना विभाग स्वामित्वको एक संग्रहालय छ।
यहाँ वर्ग चिकित्सा विद्यार्थी आउँछन्। तिनीहरूलाई लागि, यहाँ यो एक पुस्तकालय, एक सिनेमा संग सुसज्जित, र anatomical नमूनों को एक किसिम प्रदर्शन गरिएको छ। यस आउन सक्नुहुन्छ र रुचि पर्यटकहरु, तिनीहरूले संग्रहालय मार्गदर्शन गर्न एक व्याख्यान पढ्न हुनेछ।
रूस र संसारमा Anatomical थिएटर अझै पनि बाँकी छन्। तिनीहरूलाई थुप्रै काम एक संग्रहालय रूपमा केही चिकित्सा र वैज्ञानिक समुदाय लागि बैठक ठाउँहरू छन्। तर, anatomical थिएटर को ऐतिहासिक मूल्य अकाट्य छ, र हाम्रो कार्य - भविष्यमा पुस्तामा लागि उनलाई संरक्षण गर्न।
टीका - एक टीका ... प्रकार। बच्चाहरु को लागि खोपहरु
मानव endocrine प्रणाली यस्तै छ भनेर मुख्य कारक
घाँटी swab वा नाक। प्रक्रिया र प्रयोगशाला परीक्षण को प्रकार
जहाँ gallbladder सबैलाई छ जान्नुपर्छ
Vsesvyatskoye चिहान क्रास्नोडार: वर्णन, इतिहास, दन्त्यकथा र समीक्षा
रीड "पिघला कोर": यो स्थान प्राप्त कसरी?
शुल्क के हो? यो व्याख्या र उदाहरण छ
तरकारी बीचमा नेता - बीट। अत्यन्तै राम्रो को उपयोगी गुणहरू।
गर्भावस्थाको समयमा थिम: संकेत र विनाशकारीता
"Shadowboxing 3": अभिनेता र भूमिकाको
के सपना मा एक मुसा गर्छ?
आफ्नो दाहिने हात को औंलाहरु मा Numbness: गराउनुहुन्छ र उपचार
Dizbakterioz र आंतों microflora को बहाली
"Kraz-256" - "unkillable" डम्प